Noraofin’i Japana noho ny Tahotra ISIS ny Pasipaoron’ny Mpakasary Iray Miozona ho any Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2015 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Español, 日本語
Saripika: Saku Takakusaki. Lisansa: Fanononana anarana-Zarao tahaka izao 4.0 Iraisampirenena Creative Commons
Noraofin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Japoney tamin'ny 7 Febroary teo ny pasipaoron'ilay Japoney mpanao gazety mpaka sary mahaleotena Yuichi Sugimoto noho ny fikasany handeha ho any Syria.
Tonga noho ny famonoana mampihoron-koditra ireo teratany japoney mirahalahy, ny mpanao gazety Kenji Goto sy Haruna Yukawa, nataon'ny ISIS tamin'ny janoary teo, no nahatonga ny governemanta japoney hifoaka ny pasipaoron'i Sugimoto. Nanohina hatrany amin'ny lalina tao Japana amin'ny ankapobeny ny famonoana azy ireo, fa nialoha ny vono olona ny Japoney dia tsy mba nieritreritra velively fa mety ho “fahavalo” na mpifanandrina amin'ny vondron'olona na iza izy na iza.
Niova izany fomba fijery izany hatramin'io fotoana io. Misy ankehitriny ao Japana ny fahatsapana manjavozavo fa misy ny toerana tsy azo ekena handehanana. Raha tokony hanontany ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny hoe fa maninona ny zon'ny mpanao gazety no noesorina, ny nataony indray dia hoe, “Maninona no mbola misy olona te-handeha any?”
Miharihary fa tsy misy Japoney mbola te-hahita vono olona mampihoron-koditra tahaka iny indray, ary izay fihetseham-po manjaka amin'ny fiaraha-monina izany no nibahan-toerana tamin'ny fanapahan-kevitry ny minisiteran'ny raharaham-bahiny handraoka ny pasipaoron'i Sugimoto.